Cajiibka - Tilmaamaha Horumarka ah ee ku saabsan sida loo soo saaro Faahfaahinta alaabta Amazon Isticmaalka Python
. Meelahaasi waxay kuu oggolaan karaan inaad ku hesho 400 bog oo bog ah. Amazon iyo shabakadaha kale ee ganacsiga e-commerce waxay isticmaalaan ASIN, ereyo muhiim ah oo ay adeegsadaan shabakadaha e-commerce si ay ula socdaan tirada alaabta ee database ah.
Post this, waxaad baran doontaa sida loo abuuro warshad alaabta ah oo loo isticmaali doono in dib loo soo saaro sharaxaadda alaabta iyo faahfaahinta qiimaha on Amazon. Bilawga cusub, Python waa luuqadda ujeedada barnaamijka ujeedada leh ee xoogga saaraya akhriska script. Halkan waa siyaabo ku saabsan sida loo isticmaalo boodhka alaabtaada.
Korjoogteynta badeecadaha Amazon
Webka wax lagu duubo ayaa si ballaaran loo isticmaalaa in la soo saaro xogaha waaweyn ee macluumaadka laga helo bogagga internetka e-commerce. Iyada oo sheyga wax lagu duubo, waxaad si sahlan u eegi kartaa helitaanka stock, saamiyada macaamiisha, iyo isbedelka qiimaha.
Falanqaynta sida badeecadaha ay u iibinayaan Amazon
fiirinta macluumaadka Webku waxay ka dhigan tahay in la soo saaro macluumaad faa'iido leh oo laga helo goobaha. Si aad ugu noolaato tartanka adag ee suuqyada maaliyadeed, waa inaad raadisaa kartidaada tartanka. Sanadihii la soo dhaafay, goobaha ka soo gala goobaha e-ganacsiga ayaa ah waxqabadyo adag oo qallafsan. Thanks to Python, xoqista boggaan ayaa loo sahlay.
Dhuxul wax soo saarka si sahlan ayaa ufiiriya macluumaadka laga soo bilaabo Amazon iyadoo la muujinayo ASIN. Macluumaadka la soo bixiyay waxaa isticmaala ganacsatada maaliyadeed si ay u falanqeeyaan badeecadaha ay ku iibinayaan Amazon. Sawirrada ayaa loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan. Halkan waa isticmaalka kale ee waraaqaha wax soo saarka.
Falanqaynta qiimeynta wax soo saarka Amazon iyo dib u eegista
Baaritaanka badeecadaha badeecadda ee API
Falanqaynta sicirka lacagta iyo daahfurka
Python waxaa lagu talinayaa marka ay timaado soo saarida iyo feylasha faylasha laga helo bogagga internetka sida Amazon. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aanad qodin intaa ka badan si loo helo xogta laga helo bogagga internetka e-commerce, aynu ka fikirno faahfaahinta laga soo saari karo goobahan. Halkan waxaa ku qoran liiska pin-tilmaameed oo muujinaya qoraallada xogta ee laga heli karo qashin alaab.
Qiimaha iibka alaabta
Shuruudaha xirmooyinka Python
Mashruucan, mawduuca dhexe wuxuu isticmaalayaa Python si uu u soo dejiyo oo u kala saaro HTML. Dib-u-helidda xogtaada adigoo isticmaalaya Python waa sida midig-gujinta walxaha. Waa wax fudud. Soo deji HTML oo ka soo jeeda bogga internetka ee aad doorbideyso iyo aqoonsiga dhammaan XPath ee qaybta la beegsaday sida qiimaha iyo sharaxaadda alaabta.
Miyaad leedahay magaca lambarka si aad u isticmaasho? Haddii ay haa tahay, aan sii wadno. Si fudud u qor magacaaga koodhka codsigaaga. Ka dib markaad hesho lambarka, u bedel ASINs-kaaga. Faylka ka soo baxa JSON (xogta. json) oo ka kooban dhammaan liisaska macluumaadka ASINs ayaa la abuuri doonaa.
Xeerarka iyo shuruudaha shabakadaha internetka e-commerce. Markaad xoqeysid, ka fogow inaad jabiso qorshaha shabakadda si aad uga fogaato liiska madow. Websaydhada E-commerce ayaa xadidaya dadka isticmaalaya in ka badan 400 bog oo qayb kasta ah. Iyada oo la xoqdo wax soo saarka Python, waxaad si sahlan u kormeeri kartaa alaabta qiimeynta iyo xisaabtanka stock Source .